Shiinaha oo la Habeeyay GCK(L) Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qiimaha-shengteShengte
GCK(L) La Habeeyay ee Qalabka Korantada Hooseeya ee Warshada Warshada Qiimaha-shengte
GCK (L) qalabka wax-soo-saarka ee hooseeya wuxuu ka kooban yahay xarunta qaybinta korantada (PC) golaha wasiirada iyo xarunta kontoroolka mootada (MCC).
Waxay ku habboon tahay isticmaalayaasha tamarta sida warshadaha korontada, substations, warshadaha iyo shirkadaha macdanta sida AC 50Hz, ugu badnaan shaqada danab ilaa 660V, ugu badnaan shaqeeya hadda in 3150A nidaamka qaybinta, sida qaybinta awoodda, xakamaynta motor iyo nalalka qaybinta qalabka beddelka awoodda.Qaybinta iyo xakamaynta.
Qaabka golaha wasiirada waxaa lagu alxanayaa bir qaabeysan oo gaar ah oo leh xoog wanaagsan iyo qallafsanaan.
Shelefyada iyo qaybaha godadka lagu dhejiyo waxaa loo soo saaray si waafaqsan modules 20mm.
Qaybaha qaab dhismeedka gudaha waa galvanized, iyo qaybaha dibadda (sharafyada iyo qufulka albaabada) waa fosfateed oo lagu buufiyo budada epoxy electrostatic.
Qaab dhismeedka golaha quudiyaha PC wuxuu la mid yahay golaha quudiyaha.Marka quudiyaha hadda uu yahay 630 A ~ 2000A, armaajo kasta waxaa lagu qalabayn karaa laba siddo oo lagu rakibay kor iyo hoos.
Xarunta korantada (PC), qaybta sare waa aagga baska jiifka ah, qaybta hoosena waa qolka wareegga wareegga.Wareegga wareegga waxaa lagu qalabeyn karaa taxanaha ME ee qaranka, taxanaha CW1 iyo wixii la mid ah.Waxa kale oo lagu qalabayn karaa dhammaan noocyada kala duwan ee xadhig-wareega ee dibedda laga soo saaro, sida kuwa ay soo saarto Shirkadda ABB, marka loo eego taxanayaasha macmiilaha ee baahiyaha.
Nidaamka Baska: Baska golaha wasiiradu waxa uu qaataa saddex waji oo silig ah, hal bas marka lagu qiimeeyo baska jiifka ahi waa 1250 A ama ka yar, laba bas marka lagu qiimeeyo baska biyaha waxa uu ka sareeyaa 1250 A, baska jiifa ee u dhaxeeya golaha wasiirada iyo golaha wasiirada waxaa lagu dhisay baloogyo isku xira, baska toosan waxaa lagu xiray saxan galvanized ah iyo saxan plexiglass hufan, iyo baffle gudaha ah ayaa loo isticmaalaa si loo xaddido fidinta qaansada.Baska dhexdhexaadka ah wuxuu ku yaalaa dhinaca hore ee golaha wasiirada, iyo baska difaaca (PE) wuxuu ku yaalaa dhinaca hoose ee golaha, kaas oo ku xiran qaybta qaybta iyo albaabka golaha wasiirada, sidaas darteed hubinta sii socoshada dhulka.
Golaha wasiirada iyo khaanadaha khaanadaha ee qorshayaasha go'an sida magdhowga capacitance iyo mitirku waxay leeyihiin qaab muuqaal ah iyo isla booska baska jiifka ah, si loo hubiyo in khaanadaha iyo golaha wasiirada ee go'an loo isticmaali karo dhinac dhinac.
Xagga hoose iyo sare ee golaha beddelka waxa ku yaal daaqado hawo dabiici ah iyada oo aan la dhimin heerka ilaalinta qolofka.
Heerka ilaalinta qolofka golaha wasiiradu waa IP4.
Inta jeer ee hawlgalka lagu qiimeeyay (Hz) 50
Danab shaqaynaysa oo la qiimeeyay (V) 380
Korontada dahaarka ee la qiimeeyay (V) 660
Dhaqdhaqaaqa ugu sareeya ee la qiimeeyay (A) Baarka baska ee taagan 630-4000
Bar baska toosan 1600
Inta ugu badan ee lagu qiimeeyay adkaysiga wakhtiga gaaban Baarka baska ee taagan 80kA (Qiimaha waxtarka leh)/1 s
Bar baska toosan 50kA (Qiimaha waxtarka leh)/1 s
U adkaysiga ugu sarreeya ee la qiimeeyay Baarka baska ee taagan 170kA
Bar baska toosan 110kA
Furaha Wareegga Weyn (A) 200/400/630
Xidhiidhiyaha Wareegga Kaaliyaha (A) 10
Soo noqnoqda tamarta 1 daqiiqo (A) 2500
Awoodda ugu badan ee mashiinka xakamaynta (kW) 155
Heerka ilaalinta IP30-IP40
Habka hawlgalka Maxalli, fogaan, toos ah
Hore: Qiimaha Jumlada ee HXGN-12 AC Bedelida Voltage Sare ee Birta go'an
Xiga: Qiimaha Warshadda GGD AC Qaybinta Korantada Hoose ee Cabinet-ka-shengte
Ugu Fiican KYN28A-12 Gudaha Birta Gaashaaman ee Soo Bixinta S...